Laba Kooxood Sixitaanka Ma Aqbalaan
Friday November 26, 2021 - 18:43:40 in Articles by Hadhwanaag News
= Gancsatada: Ninka gancsadaha ahi waa nin inta badan wakhtigiisa amaro iyo tilmaamo bixiya oo aan u baran in isaga la tilmaamo ama la amro. Shaqadiisa nolol maalimeedka ahi, waxa ay ku dhisan tahay: Waar koontiinarkaa halkaa ka soo qaad, soo rara alaabooyinka, waxaasi ayaa lagu goynayaa qiimaha iibka, lacagtaasi sidaasi ka dhiga IWM. Ma dhacdo inta badan inay shaqaalihiisu kala horyimaadaan tilmaam ama doodd tiisa lagu diidan yahay, iyada oo tusaalooyin kala duwan dhinacyo badan laga tusaayo.
Wadaaddada Talbliiqa ayaa ugu waaqicisan ogaalkay intaan arkay wadaaddo waaqaca la socda, waayo iyagu waxa ay ku dhexjiraan bulshada. Maalin dhawayd oo aan bas soo raacay, waxa na soo raacay nin wadaad ah, baskana hees ayaa ka baxaysay. Dirawalka basku wuu mirqaasan yahay, weliba qaad ayuu afka ku hayaa. Wadaadkii ayaa amar bixiyey oo yidhi” Adeer heesta bakhtii” dirawalkii ayaa ugu jawaabay "bakhtiin mayno ee adiga maxaa kaaga xidhan” mise waa kaa markiiba yidhi” noo joog aanu kaa degnaa, waa maxay caasigani” sidii ayuu kaga degay baabuurkii. Wakaa dirawalkiina ugu jawaabay, naga deg Daacish yahay.